पर्सी आउन लागेको मुटूको चाड ‘भ्यालेन्टाइन डे’ संग लडौं भनेको होइन है, पाठकहरु। भर्खर माया बुन्न लाउनु भएका या मायाले चुम्लुगं डुब्नुभएको भए ढुक्क भएर मुटू जोड्नुहोला। कुरो के भने यो फेब्रररी महिना मुटूकै चाड जस्तो छ। यो महिनालाइ मुटु रोगको जानकारी गराउने महिनाको रुपमा पनि लिइदों रहेछ। अस्ती एउटा भारती पसलमा पर्चामा पढेको थिएं, अमेरीकीलाइ भन्दा भारतीय, नेपाली आदीलाइ मुटुको रोग लाग्ने संभावना ३ गुना बढी हुन्छ रे। कारण के रहेछ भने हामीहरुको रगतमा blood fat triglyceride अत्याधीक र HDL (राम्रो कोलस्ट्रोल) एक्दमै कम हुन्छ रे। हामीहरुलाइ डाइबेटीज हुने संभावना पनि उत्तीकै हुन्छ रे। यो त भयो हाम्रो रगतको दोष। अर्को हाम्रो दोष के छ भने जागिरमा बाहेक कसरत गर्ने भनेको भर्‍याङ उक्लनु मात्रै हो। एलिभेटर छ भने या ग्राउन्ड फ्लोरमा बस्ने भए त्यो पनि चाहीएन। बिदेशमा सस्तो मासु र बियर, त्यो पनि छोड्ने कुरो भएन। बिदेश आए पछि तपाइ या तपाइका साथहरुले कति वजन थप्नु भएको छ? प्राय सबैले, होइन त? अब भन्नुहोस त अब मुटूको रोग लाग्ने संभावना कती छ हामीलाइ? ६ गुना त पक्कै होला?
तपाइहरुलाइ तर्साउन भनेको होइन है फेरी। तर पनि नेपालकोमात्रै ख्याल गर्ने लेखहरु मात्रै लेखेर भएन नि, नेपालीको ख्याल राख्ने लेख पनि त लेख्‍नुपर्‍यो। अमेरीकामा मात्रै दिनमा २४०० जना मानिसहरु मुटुकै रोगका कारण ज्यान जाने गर्छ। विश्वमा एकै दिनमा मुटुको कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या ५०,००० छ। यस्को अर्थ मर्नेहरुमा एक तिहाइ मुटूका रोगी पर्नेरहेछन। गाउं घरमा मानिसहरुलाइ चक्कर आयो ढल्यो, एक छिन पछी आर्यघाट। पत्तै हुदैन के ले मर्‍यो मर्‍यो । प्राय: यसरी अकस्मात इहलिला समाप्त मुटूकै रोगले हुने गर्दछ। सम्झनुहोस त, तपाइले चिनेका मात्रै बाटोमा हिड्दा हिड्दै या बोल्दा बोल्दै कती जनाको जिवन चेट भएको छ?
फेब्रररी महिनाको अबसर पारेर मुटुको रोग हुने कारण र समाधानका केही उपाय यांहा प्रस्तुत गर्दैछु।
मुटूको रोग लाग्ने मुख्य कारण हुन:
मुटुको रोगको परिवारीक इतिहास भएको।
अत्याधीक मोटोपन भएको।
शारीरिक रुपमा कम शक्रिय हुनु।
अत्याधीक कोलस्ट्रोल हुनु।
अत्याधीक ब्लडप्रेसर हुनु।
धुम्रपान सेवन गर्नु।
डाइबेटिजको रोगी हुनु।
नआत्निहोस है पाठकहरु, समाधान पनि सजिलै रहेछन।
समाधान हरु यस प्रकार छन:
१० प्रतीश मात्रै भए पनि वजन घटाउनु।
फस्टफुड तथा नराम्रो खाने बानी छोड्नु।
सोफमा मात्र लम्पसार नपरी यता उता गरी आफुलाइ फुर्तीलो बनाउनु।
सांझमा दांत माझ्ने तथा दात फ्लस गर्ने गर्नु।
सधै तनावबाट मुक्त रहने गर्नु।
स्वस्थ्य खाने कुरा जस्तै सागपात तथा फलफुल खानु।
माथीका कुरामा याद राखे मुटूको रोगबाट लड्न पक्कै पनि सकिन्छ। दौंतरीका सबै पाठकहरुलाइ यो ब्लगले स्वस्थ्य रहन पक्कै पनि प्रेरणा मिल्नेछ भन्ने आशा गरेको छु।
Posted by: nepalean Labels: कामलाग्ने कुरा
अत्यन्तै हितकर लेख लेख्नु भएकोमा धेरै धन्यवाद है नेपालीयन जि । बेला बेलामा यस् किसिमका चेतनामूलक लेख पढिरहनु पर्छ हामी सबैले । किनकी हामी मान्छेको आफ्नो स्बास्थ्य सम्बन्ध मा ख्याल राख्ने भुल्ने बानी हुन्छ ।
"भारती,नेपाली आदी को HDL (राम्रो कोलस्ट्रोल) एक्दमै कम हुन्छ" भन्ने कुरो एकदमै सही हो जस्तो लाग्यो । मेरो पनि त्यस्तै देखियो, slim and almost fit भए पनि । प्राय अमेरिकीहरु को HDL नर्मल हुंदो रहेछ तर LDL (Bad Cholesterol)भने बढी हुंदो रहेछ (मेरो LDL चांहि Normal) ।
डाक्टर संग कुरा गर्दा गूड कोलेस्ट्रोल बढाउन को लागि चुरोट नखानु र हप्तामा कम से कम ३ दिन cardio गर्नु भन्ने सल्लहा पाइयो ।
यो जानकारि मुलक लेखको लागी धन्यवाद्, समस्या आईसकेपछि समाधान गर्नु भन्दा पहिल्यै समस्या रोकथाम गर्न सके वा समस्या पन्छाउन सके राम्रो हुन्छ ।
कारणमात्रै नदिई रोकथामका सरल उपाए पनि दिनु भएकाले यो पोष्ट सबैकालागी उपयोगी हुनेछ जस्तो लाग्छ ।
हो भारतीय र नेपालीमा trglyceride र LDL ( Low Density cholesrol ) अत्यधिक हुन्छ भने हाइडेन्सिटी कोलेस्टोरल कम हुन्छ । कारण के हो भने हामी अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट, गाई भैँशीको घ्यू र बोसोयुक्त मासु खाने गर्छौँ । जनवारजन्य चिल्लो पदार्थ वास्तवमा केवल हानीकारक मात्र छ भने ओखर, बदाम र नरिवल बाहेकका अन्य वनस्पतिजन्य चिल्लोका स्रोतहरू र सालमन आदि पौडिने माछामा पाइने ओमेगा फ्याटले राम्रो ( हाइडेन्सिटी) कोलेस्ट्रोल बढाउन मद्दत गर्ने गर्छ । यो बाहेक मदिरा सेवन रोक्नाले, धूम्रपान नगर्नाले , चिन्ता कम गर्नाले तथा दिनमा कमसेकम ३० मिनट नियमति हिँड्ने वा जगिङ गर्नाले मुटु रोगका कारणहरू बिरुद्द जाग्रत बन्न सकिन्छ ।
अमेरिकामा बस्ने साथिहरूलाई सालमन खान सुझाव छ । साथै हाम्रो कलेजोले प्रोटिन र अन्य फ्याट र कार्बोहाइड्रटलाई पनि नराम्रो कोलेस्ट्रोलमा परिवर्तन गर्न सक्ने भएकाले । समयमा नै आफ्नो शरीरभित्र कलेजोको स्वास्थ्यमा ध्यान दिई कुन कारणले यस्तो भैरहेको छ भन्ने कुरा पत्तो लगाउनु हुन समेत अनुरोध छ ।
"Prevention is always far away better than cure"
सरी माथिको पोष्टमा थोरै थोरै ओखर र बदामको निश्चित सेवन दैनिक रूपमा गर्दा राम्रो हुन्छ तर नरिवल र यसको तेल हानिकारक छ भन्न खोजिएको हो । म्याकडोनाल्ड , केएफसी र अन्य फास्टफूडमा प्रयोग हुने ट्रान्सफ्याट अत्यन्त हानिकारक छ , मुटुरोग निम्त्याउनका लागि ।